Halaviro ny ahiahy amin'ny divay. Mifalia sy misotroa Bordeaux Les Legendes
Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Halaviro ny ahiahy amin'ny divay. Mifalia sy misotroa Bordeaux Les Legendes
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Divay & Fanahy
Oktobra 17, 2021
Namaky 13 aho
Mba mifalia. Misotroa Bordeaux
Mpanoratra Dr. Elinor Garely - manokana ho an'ny eTN sy tonian-dahatsoratra, wines.travel
Tsy mahagaga raha misy loko marevaka ny divay - manomboka amin'ny rano madio, hatramin'ny lalina, mainty ary maitso mavana toy ny volory landy. Tsy manaitra ihany koa fa ny divay Bordeaux no anisan'ny malaza indrindra eo amin'izao rehetra izao.
Ny faritra Bordeaux no faritra mpamokatra divay lehibe indrindra any Frantsa ary misy voaloboka 280,000 hektara sy 60 Appellations d'Origine Controlees (AOCs).
Ny fanaovana divay any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Frantsa dia nanomboka rehefa tonga ny Romana (eritrereto ny taonjato voalohany).
Na dia malaza amin'ny divay mena aza iny faritra iny dia mahaliana ny manamarika fa vao nahazoana ity laza ity.
Betsaka ny orinasa mpamokatra divay
Raha ara-tantara dia tsara ny faritra Bordeaux noho ny divay fotsy (mazàna) miaraka amin'ireo mpanamboatra divay manokana bebe kokoa ny 80 isanjaton'ny tanimboalobony any Sauternes, Barsac, Bordeaux Blanc ary Fasana.
Tamin'ny 1700 vao nisy divay mena avy any Bordeaux liana ny tsena ary ireo mpitia divay anglisy dia nandray ny divay mena Bordeaux avy tany Graves ary nanonona azy io Claret (klairette). Raha vantany vao tsikaritr'ireo mpamokatra divay ny fiakaran'ny vidin'ny divay mena, dia nanomboka nifindra tamin'ny famokarana divay fotsy ka hatramin'ny mena izy ireo. Nanjary ofisialy ny fanovana tamin'ny fanasokajiana 1855 izay namantatra ireo mpamokatra tsara indrindra ao amin'io faritra io, ary nalahatra ho 1-5 izy ireo. Ny fanasokajiana dia tsy novaina (afa-tsy indray mandeha) na dia misy divay maro hafa miavaka aza.
Mba hanaporofoana ny maha-malaza ny faritra amin'ny fanaovana divay dia diniho ny zava-misy fa ny faritra dia manohana tompona chateaux miisa 6100 sy mpamboly hafa izay mamokatra divay divay 650 tapitrisa (2019). Ny taom-pananahana 2019 dia nahitana mena 85.2 isan-jato; 4.4 isan-jato no nitsangana; 9.2 isan-jato fotsy maina, ary fotsy fotsy mamy 1.2 isan-jato.
Bordeaux no mpampiasa lehibe amin'ny vitikultia sy ny indostrian'ny divay, manome asa mivantana sy ankolaka 55,000. Telo amin'ny iray amin'ny tany 4 amin'ny fambolena any amin'ny faritra no maniry tanimboaloboka ary amin'ny fitambarany dia misy mpanamboatra divay 5,6000 mamokatra divay AOC. Amin'ireo 56 isan-jato ireo dia orinasam-pianakaviana, miaraka amin'ny salan-tanim-boaloboka 19.6ha miaraka amin'ireo tanimboaloboka lehibe indrindra ao Entre deux Mers sy ny Medoc. Tombanana 5 isan-jaton'ny tanimboaloboky ny Bordeaux no an'ny tany voakilasy manerana ny morony havia sy havanana (winescholarguild.org).
Any amin'ny faritra dia mazàna ny tompon'ny chateaux no mivarotra ny voalobony amin'ny alàlan'ny olona tsy manara-dalàna izay miasa amin'ny maha olona antonony azy amin'ny fividianana ny volany voaloboka sy fivarotana / fizarana ny divay vokatr'izany. Amin'ireo divay vokarina any amin'ny faritra Bordeaux, 58 isanjato no amidy ao Frantsa miaraka amin'ireo ambiny 43 isan-jato aondrana manerantany.
Tsy politika. Jeografia: Havia, havanana, afovoany
Ny faritra Bordeaux dia mizara ara-jeografika ny vavahady Gironde ho Banky Ankavia sy Banky ankavanana ary Entre-Deux-Mer (faritra eo anelanelan'ny Vatovo Gironde sy ny Reniranon'i Dordogne).
Banky ankavia. Ireo tia divay dia mahita Medoc, Graves ary Sauternais (terroirs tsara indrindra - miorina amin'ny vatokely)
• Medoc dia manasongadina Cabernet Sauvignon; ny voaloboka dia maniry amin'ny fifangaroan'ny tany tanimanga sy ny faritry ny vatokely alluvial.
• Ny fasana dia misy an'i Cabernet Sauvignon; tany gravelly noho ny hetsika glacial ara-tantara.
• Sauternais dia misy Sauternes (divay fotsy mamy); tany gravelly mafy izay mamela ny tatatra, manakana ny voaloboka tsy hanana rano be loatra.
Banky ankavanana. Ireo tia divay dia mahita ny Libournais, Balye ary Bourg (tany tototry ny tanimanga sy vatosokay)
• Libournais dia manasongadina Saint-Emilion, Montagne, Pomerol, Fronsac, Cotes de Castillon; tanimanga misy fotony sy fasika ary siliceous ny ankamaroany.
• Ny Balye dia manasongadina Merlot, Cabernet Sauvignon ary Cabernet Franc; tanimanga amin'ny ankamaroan'ny tanimanga.
• Ahitana an'i Malbec, Sauvignon Blanc, Muscadelle, ary Semillon ao Bourg ary koa Colombard sy Ungi; tany, fasika, vatokely ary vatosokay.
Entre-Deux-Mers (divay fotsy ihany no mitondra fiantsoana AOC); Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du Mont
• Cadillac (fantatra amin'ny divay fotsy misy botrytisé mamy) misy Semillon, Sauvignon Blanc ary Sauvignon Gris; tany saro-kenatra sy gravelly.
• Loupiac dia manasongadina Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle ary Sauvignon Gris; tanimanga, tany vatosokay misy vatokely sy tanimanga.
• Sante-Croix-du Mont dia manasongadina an'i Semillon, Muscadelle, ary Sauvignon; tanimanga, tany vatosokay.
Ny divay fotsy Bordeaux dia matetika vita amin'ny Sauvignon Blanc sy Semillon ary marihina fa velona sy vaovao (Entre-Deux-Mers) mankany malefaka sy citrus (Pessac-Leognan).
Ny divay mena avy any Bordeaux dia mazàna feno vatana feno fofona currants mainty, plum ary tany na vatokely lena. Ao amin'ny lanilany, ny mombamomba ny tsiro dia misy mineraly, voankazo ary zava-manitra, manome tannins (tsara ho an'ny fahanterana).
Ny mena Bordeaux dia matetika mifangaro amin'ny marika milaza ny fiantsoana ny divay fa tsy ny karazana voaloboka voafaritra. Ny karazana fotsy dia ahitana ny 100 isan-jaton'ny voaloboka ambolena, miaraka amin'ny Sauvignon Blanc 5 sy Semillon XNUMX isan-jaton'ny Muscadelle sy ny fotsy hafa.
Amin'ireo voaloboka nambolena tao amin'ny faritra, 89 isan-jato no karazana mena, 59 isan-jato Merlot, 19 isan-jato Cabernet Sauvignon, 8 isan-jato Cabernet Franc ary ny roa isan-jato farany dia ahitana Petit Verdot, Malbec na Carmenere.
Na ny toetrandro
Ny voaloboka Bordeaux dia mankafy fahavaratra mafana sy mafana, lohataona sy fararano mando, arahin'nny ririnina antonony. La Foret des Landes, ala lehibe misy hazo kesika, miaro ny faritr'i Bordeaux amin'ny fiantraikan'ny toetrandro an-dranomasina amin'ny Ranomasimbe Atlantika; na izany aza, misy fiatraikany amin'ny faritra ny fiovan'ny toetrandro ary misy vokany ny vokatra. Ny Institut National de l'origine et de la Qualite (INAO), fizarana iray an'ny Ministeran'ny Fambolena any Frantsa, dia nandany folo taona nanaovana ny fikarohana ny fiovan'ny toetr'andro. Ny mpahay siansa sy ny mpamboly divay ao Bordeaux dia mihevitra am-pitandremana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny mari-pana manerantany sy ireo karazana vao haingana izay nohajaina tsara mba hanamaivanana ny fihenan'ny hydrika mifandraika amin'ny fiakaran'ny mari-pana sy ny tsingerin'ny fitomboana fohy.
Tamin'ny volana Jona, 2019, ny Bordeaux sy Bordeaux Superieur Associations dia nanaiky ny fanampiana aretina fito vaovao sy ireo karazana voaloboka mahazaka hafanana ary io no fanovana voalohany ny karazany 13 tany am-boalohany tao amin'ny faritra nanomboka tamin'ny 1935. Ireo karazany vaovao nankatoavina fito dia misy ny mena (Marselan, Touriga Nacional, Castets, Arinarnoa), ary fotsy (Alvarinho, ary Lilorila) miaraka amin'ny fambolena karazan-tsakafo vaovao voalahatra amin'ity taona ity. Ny karazany vaovao dia voafetra amin'ny 5 isan-jaton'ny tanimboaloboka nambolena ary tsy afaka mitaky mihoatra ny 10 isan-jaton'ny fifangaroana farany amin'ny loko rehetra.
Bordeaux dia nampiditra fanao enolojika sy fambolena hafa hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro, ao anatin'izany: ny fampifanarahana ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny filan'ny tsirairay amin'ny fanetezam-boaloboka mihemotra, fampitomboana ny haavon'ny vatan-kazo mba hampihenana ny faritra misy ravina; mametra ny manify ravina hiarovana ny voaloboka amin'ny masoandro; fampifanarahana ny toerana misy ny vilany hanalefahana ny fihenan'ny hydrika (tototry ny rano maharitra na maharitra vanim-potoana ny vokatry ny aretina anaerobika); fijinjana alina ary mampihena ny hakitroky ny zavamaniry.
Maherin'ny 65 isan-jaton'ny tanimboaloboka Bordeaux no voamarina fa tontolo iainana (zaridaina vaovao ho an'ny faritra). Bordeaux dia mitarika ny AOP frantsay rehetra amin'ny mari-pankasitrahana avo lenta momba ny tontolo iainana (HVE) ho an'ny orinasa mpamokatra divay, rehefa nahatratra ny ambaratonga ambony amin'ny mari-pahaizana maharitra any Frantsa ary ny fisondrotana 30 isan-jato amin'ny fambolena biolojika.
Ireo mpandresy divay ao Bordeaux dia mizara fahitana iraisana sy fanoloran-tena hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro amin'ny alàlan'ny fitehirizana ireo loharanon-karena amin'ny rano sy angovo; fiarovana ny tontolo iainana simba; ary ny fanohanana ny harena voajanahary manomboka amin'ny fomba fanao amin'ny tanimboaloboka tsara indrindra ka hatramin'ny fonosana hafa. Ny fanoloran-tena amin'ny faharetana dia misy ny fiheverana amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny mpiasa, ny fahafaham-po amin'ny asa ary ny fiofanana sy ny fampandrosoana / fiofanana ho an'ny taranaka ankehitriny sy ho avy.
Chateau divay manan-danja ao Bordeaux
Domaines Barons de Rothschild (Lafite) Les Legendes dia manome divay tsara azo atao
Ny tantaran'ny divay an'ny Lafite sy Latour dia maharitra an-jato maro. Ny fotoana voalohany nisehoan'ny anarana Lafite dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-13 (1234) raha i Gombaud de Lafite, abbot an'ny Monastera Vertheuil (avaratry Pauillac) no voatonona. Ny anarana Lafite dia avy amin'ny fiteny fiteny Gascon hoe "la hite" na Hillock.
Heverina fa ny tanimboaloboka dia efa tao amin'ilay trano rehefa nandamina ny tanimboaloboka ny fianakavian'i Segur tamin'ny taonjato faha-17 ary nanomboka nalaza ho toeram-pivarotana divay i Lafite. Tamin'ny taonjato faha-18 dia nanomboka nitety ny tsenan'i Londres i Lafite ary voamarika tao amin'ny Gazetin'i London (1707) nilazalaza ny divay ho toy ny kitapom-baovao frantsay vaovao. Robert Walpole, ny praiminisitra, dia nividy barika Lafite isaky ny telo volana. Ny fahalianan'ny frantsay ny divain'ny Bordeaux dia tsy nanomboka raha tsy taona maro taty aoriana manaraka ny dian'ny brits.
Nandritra ny taonjato faha-18, Marquis Nicolas Alexandre de Segur dia nanatsara ny teknikan'ny fanamboarana divay ary nanatsara ny voninahitry ny divay tena tsara tany amin'ny tsena ivelany ary indrindra tao amin'ny lapan'ny Versailles. Fantatra amin'ny anarana hoe "The Prince Prince", i Lafite dia lasa The Kings Wine niaraka tamin'ny fanohanan'ny masoivoho mahay iray, ny Marechal de Richelieu. Rehefa notendrena ho governoran'i Guyenne i Richelieu, dia nanantona dokotera tao Bordeaux izay nanoro hevitra azy fa Chateau Lafite no, "ny tsara indrindra sy mahafinaritra indrindra amin'ny tonika rehetra." Rehefa niverina tany Paris i Richeliu dia nilaza taminy i Louis XV: "Marechal, tanora kokoa noho ny dimy amby roapolo taona ianao raha nitodi-doha nankany Guyenne." Richeliu dia nilaza fa nahita ny Loharanon'ny Tanora niaraka tamin'ny divay avy amin'i Chateau Lafite izay, "matsiro, malala-tanana, tsara fanahy, azo ampitahaina amin'ny ambrosia an'ny andriamanitr'i Olympus."
Lafite dia nahazo dokambarotra tsara tao Versailles ary nahazo ny fankatoavan'ny Mpanjaka izy. Ny tsirairay izao dia maniry ny divay Lafite ary natolotr'i Madame de Pompadour tamin'ny fandraisam-bahininy izy ary i Madame du Barry no nanolotra ny divain'ny Mpanjaka irery.
Ny divay Bordeaux sarobidy an'ny aristokrasia frantsay (Domaines Barons de Rothschild / Lafite) dia azontsika amin'ny alàlan'ny marika Legende.
1. Legende Medoc 2018. Merlot 50 isan-jato, Cabernet Sauvignon 40 isan-jato, Petit Verdot 10 isan-jato. Ampahany antitra amin'ny hazo terebinta mandritra ny 8 volana manome naoty vanila sy setroka mifoka.
Faly ny maso noho ny loko mena midorehitra ary ny orona dia ankafizin'ny fofona zava-manitra mamy, voankazo mena, fifangaroana mamy, mangidy, masira ary marikivy (eritreretina licorice), nohamafisin'ny fanamarihana mocha sy toast avy amin'ny fahanteran'ny barika. . Ny tsiro dia mijanona eo amin'ny lanilany manolotra traikefa iray izay mailaka sy manitra manome freshness amin'ny farany. Amboary miaraka amina henan'omby, zanak'ondry, hazandrano, na akoho amam-borona.
2. Legende R Pauillac 2017. 70 isan-jato Cabernet Sauvignon, Merlot 30 isan-jato. Enimpolo isan-jato isan-taona any amin'ny hazo terebinta frantsay mandritra ny 12 volana.
Ny fahatsapana voalohany an'ity divay volomparasy lalina ity izay misy fofona mainty dia manasongadina fa ho be pitsiny sy malina izy io. Hitan'ny orona fehezam-boninkazo, zava-manitra, vanila ary vatosoa mifangaro mahafinaritra ny orona. Matoky tena amin'ny lanilaniny izy, mamoaka voankazo mainty, voanio ary lavanila miaraka amin'ny tannins mifono. Divay feno vatana ity ary manao fanambarana feno fahasahiana ity. Amboary miaraka amin'ny steak hen'omby, laoka, fromazy matotra toa an'i Comte sy Saint Netaire.
3. Legende Saint-Emilion 2016. 95 isan-jato Merlot, 5 isan-jato Franc Cabernet (avy ao amin'ny subregion Libourne). Efapolo isan-jato taona amin'ny barila oaka frantsay.
Ny fijerena voalohany an'ity divay ity dia misy loko mena mena mena. Faly ny orona rehefa mahita licorice, plum, cherry, woodchips ary paraky. Ny lanilany dia valisoa tolo-kevitry ny mocha, anana, jirofo, ranomanitra, hazo tranainy ary firaketana tannine manankarena. Ampifanaraho amin'ny gana na kilalao terrine ary jelly, soroka zanak'ondry natsatsika tamin'ny rosemary na thyme, pizza sy pasta napolitana na lasagna.
4. Legende R Bordeaux Rouge 2018. 60 isan-jato Cabernet Sauvignon, Merlot 40 isan-jato.
9 volana amin'ny sima beton sy 60 isan-jaton'ny fifangaroana farany amin'ny barila.
Volomaso amin'ny maso miaraka amin'ny voankazo mena sy blackberry, licorice ary zava-manitra mamitaka ny orona, indrindra fa ny fofon'ny mocha sy ny toast avy amin'ny fahanton'ny barika mihatra amin'ny traikefa. Vaovao sy voankazo amin'ny lanilaninao, ny vokatra dia voankazo mahafinaritra. Ampiarahina amin'ny risotto miaraka amin'ny saosy hena, paty Bolognese, ham ary salami.
5. Legende R Bordeaux Blanc 2020. 70 isan-jato Sauvignon Blanc, 30 isan-jato Semillon.
Faly amin'ny maso ny mavo volamena mavo mavo miaraka amin'ny mololo. Ny orona dia valisoa tolo-kevitra momba ny voankazo tropikaly sy ny fitrandrahana mineraly mineraly. Voafitaky ny tsiro boribory sy feno vatana ny lanilany ary mitondra any amin'ny famaranana citrus velona. Ampifanaraho amin'ny hazan-dranomasina, tiram-boanjo, na inona na inona misy saosy Bearnaise ary salady maitso (fitafiana tsy vinaingitra).
© Dr. Elinor Garely. Ity lahatsoratra momba ny zon'ny mpamorona ity, anisan'izany ny sary, dia tsy azo averina adika raha tsy mahazo alalana voasoratra avy amin'ny mpanoratra.
Dr. Elinor Garely - manokana ho an'ny eTN sy tonian-dahatsoratra, wines.travel
Mpitsabo mpanampy ao Ontario: Ahiahy amin'ny fasana amin'ny drafitra fanokafana vaovao
Hikatona ny hetsika misy ny hafanam-po amin'ity taona ity ...
Tsy nisy tafita velona tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina An-12 tany Rosia...
Ny Aviation Civile India dia manao fanovana paradigma amin'ny ...
Britanika iray amin'ny dimy no nandà ny torohevitra momba ny fitsangatsanganana any ivelany
Nisokatra izao i Shina sy Dominika eo anelanelan'ny roa...
Namoaka ny famolavolana ny lalao olaimpika 2022 any Beijing i Shina...
South Africa Airways: Sidina avy any Johannesburg mankany ...
Setroka misy poizina manenika an'i Delhi taorian'ny fetiben'ny Hindu
Manohy an'i Iraq, Kenya, Slovakia ary Spain i Russia ...
Ice Cube Man Vs Machine: Fandatsahana NFT Vaovao Voalohany
Ny filankevitry ny governemanta IATA dia nanome anarana ny CEO CEO Pegasus Airlines vaovao ...
Fodiana indostrialy: averin'ny IMEX America ...
Expedia dia mahita fitomboana mahavariana ho an'i Jamaika
Ny fijoroana tena tsara indrindra fantatra amin'ny WTM 2021
Taratasy misokatra faharoa nataon'ireo tompon'andraikitra ambony UNWTO mandrisika...
Fizahan-tany, fiovan'ny toetrandro, tambajotram-pifandraisana: Saodita ...
Sidina Johannesburg mankany Lagos amin'ny South African Airways...
Ny hoavin'ny UNWTO novolavolain'i Arabia Saodita sy Espaina: Vaovao...
Jamaica “Mahatonga azy io hihetsika” miaraka amin'ny New ...
Farafahakeliny olona 27 no maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny sambo anglisy Channel
Teknolojia hetsika IMEX Champions amin'ny alàlan'ny EventMB...
Business deals power ny andro faharoan'ny IMEX America
KISS frontman Gene Simmons: fahavalo ny anti-vaxxers!
Ny tatitra WTTC vaovao dia manome tolo-kevitra momba ny fampiasam-bola ...
Ahoana ny fomba hahazoana ny diplaomanao ho Nomad Digital
Grand Canyon Jewels: El Tovar Hotel sy Hopi Gift Shop
Sidina bebe kokoa mankany London, Kyiv ary Istanbul amin'ny Air ...
Airbus dia nanambara ny prototype eco-wing voalohany
Ny Breeze Airways dia mamerina ny sidina New Orleans ...
Divay manankarena any Italia Tsy misy zava-baovao: Grapes Go Native
Nandrisika ny fanemorana ny fivoriamben'ny UNWTO: Ny WTO dia...